चिनियाँ जहाजको मासिक भाडादर टुंगिएन, मर्मतमै चीनबाट आउने मूल्यांकन पर्खदै निगम| Corporate Nepal
चिनियाँ जहाजको मासिक भाडादर टुंगिएन, मर्मतमै चीनबाट आउने मूल्यांकन पर्खदै निगम
बैशाख २६, २०७८ आइतबार १२:०९
काठमााडौं । नेपाल वायुसेवा निगमलाई चिनियाँ जहाज भाडामा लगाउन र भाडामा नगए बिक्री गर्न स्वीकृति दिएको भएपनि वायुसेवा निगमले भने हालसम्म जहाज भाडामा लगाउने टुंगो लगाउन सकेको छैन् । वायुसेवा निगमका अनुसार जहाज भाडामा लगाउने काम अगाडि बढिरहेको छ तर आवश्यक प्रक्रिया पूरा नभएको हुँदा ढिलो भने भएको छ ।
वायुसेवा निगमका महाप्रवन्धक डिमप्रसाद पौडेलका अनुसार जहाज भाडा दिन पहिले बिग्रिएको जहाज मर्मत गर्नुपर्ने भयो । पौडेले भने ‘एउटा एमए ६० को मुख्य पाटपूर्जा मध्येको एउटा विंङ्स बिग्रिएको छ । यसलाई नबनाइकन भाडामा लगाउन नमिल्ने भएकोले पहिले यो बिग्रिएको पार्ट मर्मत गर्ने र त्यसपछि मात्रै भाडामा दिने प्रस्ताव सार्वजनिक हुन्छ।’
निगमका अनुसार जहाज बिग्रिएको अवस्थामा भाडामा दिन नमिल्ने र उड्ने बनाएर दिनुपर्ने हुन्छ । भाडामा लिने कम्पनीले पनि जहाज फिर्ता गर्दा जहाज उड्ने अवस्थामा नै फिर्ता दिनुपर्ने भएकाले अहिले दिँदा पनि कम्तिमा जहाज उड्ने बनाउनु पर्ने जानकारी निगमले दिएको छ ।
निगमले ६ वर्षमा चिनियाँ जहाज उडाएर मात्रै करिब साढे दुई अर्ब घाटा पुर्याएको र जहाज उडाएर लाभ लिन नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै जहाज नउडाउने निर्णय १५ साउनदेखि नै गरेको थियो । चिनियाँ जहाज एमए ६० र वाई १२ नामका पाँच जहाज एक साताभित्रै भाडामा लगाउने प्रस्ताव आव्हान गर्न तयार भएपनि जहाज मर्मत गर्न लाग्ने शुल्क नै निर्धारण भएको छैन् । कम्तिमा यो मर्मत शुल्क घटाएर भएपनि भाडामा लगाउने शुल्क तय गर्नुपर्ने निगमको भनाइ छ ।
एउटा जहाज भने गत वर्ष दुर्घटनामा परेर पूर्ण क्षति भएर थन्किएको छ । बाँकी पाँच जहाज भने भाडामा लगाउन निगमले उपयुक्त कम्पनी खोज्न र उचित मूल्यमा भाडामा लगाउने तयारी गरिरहेको पनि निगमका महाप्रवन्धक पौडेलले बताए ।
जहाज भाडामा लगाउन गत चैत १७ गते मंगलबार निगमका उप प्रवन्ध निर्देशक केबी थापाको अध्यक्षतमा एक समिति बनाएको थियो । समितिले एक साताभित्र जहाज भाडामा लगाउने प्रस्ताव आव्हान गर्नुपर्ने भएपनि भाडामा लगाउने शुल्क तय नै नभएकोले प्रस्ताव आव्हान गर्न ढिलो भएको पनि निगमका महाप्रवन्धक पौडेल बताउँछन् । चैत तेस्रो साताभित्रै मासिक कति शुल्क लिएर भाडामा दिने भन्ने विषय तय यही समितिबाट हुन्छ भन्ने थियो । सो समितिले आवश्यक प्रक्रिया पुर्याएर निर्णय गर्न नसकेले पनि भाडामा दिने विषयको टुंगो लाग्न ढिलो भएको पनि निगमका महाप्रवन्धक पौडेल बताउँछन् ।
उनका अनुसार सरकारकै निर्देशन अनुसार जहाज भाडामा दिन न्युनतम शुल्क तय हुने र एक साताभित्रै भाडामा दिन प्रस्ताव भन्ने भएपनि आवश्यक प्रक्रिया नै नपुर्याई भाडा दिने प्रस्ताव माग्न नमिलेको हो । निगमले सबैभन्दा पहिलो प्रयास भाडामा नै दिने प्रयास गर्ने छ । कुनै कारणबस भाडा गएन भने मात्रै सरकारले दिए अनुसारको दोस्रो विकल्पको रूपमा मात्रै जहाज बिक्रीको लागि प्रक्रिया अपनाउने जानकारी पनि दिएका छन् ।
निगमले सात वर्ष अगाडि भित्र्याएको चिनियाँ जहाज अन्ततः ऋण चुक्ता नगर्दै विस्थापित गर्न लागेको हो । तीन अर्ब ऋण रहेको यो जहाजले किस्ता तिर्न सुरु नगर्दै जहाज विस्थापन गर्ने निर्णयमा पुगेको हो । निगमले ५६ सिट क्षमताको दुईवटा एमए ६० र १७ सिट क्षमताको चारवटा वाई १२ जहाज भित्र्याउँदा तीन अर्ब १४ करोड ऋण तिर्ने बाँकी छ । यो ऋणको पहिलो किस्ता पनि नतिरी जहाज ग्राउन्डेड गरिएको थियो ।
निगमले सरकारमार्फत चीनको एक्जिम बैंकलाई दुईवटा एमए–६० को एक अर्ब ६५ करोड आठ लाख ८३ हजार र चार वटा वाई–१२ को एक अर्ब ३६ करोड ९६ लाख ६ हजार ७८२ ऋण तिर्नुपर्ने छ। गत साता मात्रै अर्थ मन्त्रालयले निगमसँग भएको एमए ६० र वाई १२ ई नामकका जहाजलाई भाडामा लगाउन र भाडामा नलागेको अवस्थामा बिक्री गर्ने राय दिएको थियो ।
यो पनि पढ्नुस्,
चिनियाँ जहाज भाडामा लगाउन मासिक शुल्क तय गर्दै निगम, एक साताभित्र प्रस्ताव मागिने
तीन अर्ब ऋणमा डुबेको जहाज कसरी हुँदैछ विस्थापित ? केमा कति गुमायो चिनियाँ जहाजले ?
बीस अर्ब ७६ करोडको निर्यात हुँदा एक खर्ब ३० अर्बको व्यापार घाटा
सरकारी कम्पनीले ३९ जिल्लामा सुपथ मूल्य पसल खोल्ने, बजार मूल्य भन्दा १० रुपियाँसम्म सस्तो
नायिका करिस्मा मानन्धरले भित्र्याइन् इन्टेक्स ब्राण्डका इलेक्ट्रोनिक्स सामान
नेपाली धागो ‘पोलिमर यार्न’मा लागू गर्दै आएको ‘एन्टि डम्पिङ ड्युटी’ इण्डियाले हटायो